Paartileen siyaasaa Oromiyaa keessatti socho’an mana maree waliinii hundeeffatan
Filannoon ji’aa Ebla keessa deemsi­famu demokraatawaa, bilisaafi haqa-qa­beessa akka ta’uuf paartileen Oromiyaa keessatti socho’an tibbana mana maree waliinii hundeessan.
Akkaataa labsii paartiilee siyaasaa naamusa filannoo kabajuuf labsii lakk. 662/2002 bahe bu’uura godhachuun dhaabbileen siyaasaa:- Dh.D.U.O., paartii Sirna Gadaa, Adda Bilisummaa Oromoo Abboo, Kongiransii Biyyaa­leessa Oromiyaa, Paartii Demokraatawaa Oromoo Biyyaalessaa, Adda Tokkum­maa Bilisummaa Oromoofi paartii Wal­abummaa Biyyaalessa Oromoo ta’uun mana maree hundeessaniiru.
Dhaabbileen kuunneen mana maree waliinii hundeessuun isaanii, naamusa filannoo kabajanii hojjechuudhaaf kan gargaaru yoo ta’u, filannoon bara kanaa karaa nagaan akka raawwatuuf faayidaa guddaa qaba jedhameera.
Dh.D.U.O. bakka bu’uun kan ar­gaman Ob. Ibraahim Hajii wayituma kana akka jedhanitti, sirna ijaarsademokraasii biyyi keenya eegalte caal­maatti guddisuudhaaf haqa qabeessum­maan filannichaa mirkanaa’uu qaba. Kanaaf ammoo, rakkoolee quunaman dhiyeenyatti hordofuun yeroon hiikuun kan danda’amu ijaaramuu manni maree kanaan akka ta’e ibsaniiru.
Paartii Tokkummaa Bilisummaa Oromoo bakka kan bu’an Ob. Adam Badhaanees akka bubbatanitti, paarti­leen walitti dhiyeenyaan mari’ataa deemuusaaniitiin hubannoon ha­waasaa gabbatee, bara 2002 filannoondemokraatawaan raawwateera. Ammas, manni maree waliinii kun hundaa’uunsaa hanqinoota mul’ataniifi garaagartee jiru gidduutti rakkoolee uumamuu danda’an furuuf gaheen inni qabu guddaa waan ta’eef dhimma murteessaadha jedhani­iru.
OBKO irraa kan argaman ammoo, Ob. Masfinee Daahiis gama isaaniitiin, rakkoolee sadarkaa sadarkaan uumaman yeroo gabaabaa keessatti mareedhaan hiikuuf kan haala mijeessu, filannichi seeraafi seeraan qofa demokraasum­maasaa eeggatee akka milkaa’uuf gar­gaara jedhanii, addaaddummaa qaban kabajuun dhimma waliinii irratti waliin hojjechuun ijaarsa sirna demokraasii keessatti gahee ol’aanaa taphatas jechu­un dubbataniiru.
Dhaabbileen hundinuu hojii filan­noof socho’an mara keessaattuu karaa nagaan hirmaachuuf kan walii galan yoo ta’u,dhumarrattis, ibsa ejjennoo ab­baa qabxii kudhanii baafataniiru.
Filannoo mana maree aanaa, magaa­laafi gandaa bara kanaa, naannoo Oromi­yaatti namoonni miiliyoona 10.5 ol ta’an ni galmaa’u jedhamee kan eegamu yom­muu ta’u, hanga ammaattis namoonni miiliyoona 6 ol galmaa’uusaanii ragaan Boordii filannoo Oromiyaarraa arganne mul’iseera.